Ady & Fifandirana · Jona, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Jona, 2008
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Jona, 2008
Palestina : Maka bahana … mitifitra [sary] … dia nahamarika
Israely 28 Jona 2008
Nampitombo isa ny fandresena norombahan'ny ady hoan'ny rariny ara-sosialy [social justice] i Muna Nawajaa. Nampiasa itony fakana lahatsary [camera] izay fanomezan'ny fikambanana B'Tselem's Shooting Back project azy, i Nawajaa izay Ramatoa Palestiniana iray, dia naka lahatsary ireo olona misaron-tava izay nidaroka sy nanao herisetra ny sasany amin'ny fianakaviany, vokatr'izany dia nanokatra...
Irak : Mainty – Lokon'ny hirifiry
Iràka 16 Jona 2008
Efa zatra mitondra fitafiana mainty ny vehivavy Irakianina amin'izao – lokon'ny alahelo sy fisaonana hoy ny voalazan'ny Inside Iraq. Misy ihany nefa eny anivon'ny haizina eny vehivavy milaza fa manao fitafiana volon-tany, maitso na mavokely mihitsy aza ! Araka ny voalazan'i Correpsondent Jenan dia : Black is the favorite color...
Sodàna : Mikasika izay raharaha any Darforo, nahoana isika no mila mifantoka tsara ?
Sodàna 06 Jona 2008
Ny namana Ethan Zuckerman no manontany tena sy mizara izay fiheviny mikasika izay raharaha any Darforo, nahoana isika no mila mifantoka tsara [mianatra] ? : One of the questions I’ve wanted an answer to for some time is how the community focused on Darfur has managed to attract so much attention...
Mikasika ny fodian'ireo tra-boin'ny herisetra sy fanafihana vahiny mpiavy mpilaravinahitra any amin'ny taniny
Afrika Atsimo 03 Jona 2008
Agry ao amin'ny navegador solidário [mpiantsambo miray hina] no mizara vaovao mikasika ny fodian'ireo tra-boina izay nisedra herisetra sy fanafihana vahiny mpiavy mpilaravinahitra any amin'ny tany nihaviany, dia i Mozambika zany : Enfim, ainda não chegou a hora do governo sul-africano reconhecer, sem rodeios, a sua responsabilidade em todo este...